Na-akwalite Podcast iTunes gị site na Smart Banner Smart | Martech Zone
Ọ bụrụ na ị gụọla akwụkwọ m maka ogologo oge ọ bụla, ịmara na m bụ nwa Apple. Ọ bụ atụmatụ dị mfe dịka m ga-akọwa ebe a na-eme m ka m nwee ekele maka ngwaahịa na atụmatụ ha.
Eleghị anya ị chọpụtala na mgbe ị mepere saịtị na Safari na iOS na azụmaahịa na-akwalite ngwa mkpanaka ha Banyere Smart App. Pịa na ọkọlọtọ, na ị na-ẹka na App Store ebe ị nwere ike ibudata ngwa. Ọ bụ nnukwu atụmatụ ma na-arụ ọrụ nke ọma ịbawanye nkuchi.
Ihe ị nwere ike ịchọpụtaghị bụ na a ga-ejikwa Smart App Pụrụ Iche kwalite gị Podcast! Nke a bụ otu o si arụ ọrụ. Njikọ anyị maka pọdkastị anyị bụ:
Iji njirimara njirimara site na URL anyị, anyị nwere ike ịgbakwunye mkpado meta dị n'etiti mkpado isi na saịtị anyị:
Ugbu a, dị ka ndị njem iOS Safari na-eleta weebụsaịtị gị na ekwentị mkpanaaka, enyere ha ọkọlọtọ ị hụrụ na saịtị anyị n'elu. Ọ bụrụ na ha pịa nke ahụ, a na-ewetara ha na pọdkastị iji denye aha!
Achọrọ m n'ezie na gam akporo ga-enwe usoro yiri nke ahụ!
Tags: ọkọlọtọ ọkọlọtọapụlitunesAhịa PodcastPodcast ọkọlọtọNjem Ileta Ụmụ Anụmanụsmart ngwa ọkọlọtọsmartbanner